Uru asatọ dị elu nke iji GitHub - ọkachamara na-ekpo ọkụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye mmepụta software ma ọ bụ onye mmemme, ị ghaghị ịnụrụ banyere GitHub. Ọrụ nlekọta a nwere ihe ndị dị egwu dịka ngwaọrụ maka ijikwa ọrụ na interface weebụ.
Ọ na-akwado ọrụ mmemme isi mmalite n'ọtụtụ asụsụ mmemme ma na-agbaso mgbanwe ndị emere na iterations. Ọ na-enwekwa atụmatụ mmekorita dị ka wikis na nlekota ahụhụ. A na-atụle uru ndị dị mkpa n'iji GitHub eme ihe n'okpuru ebe a.
1. Atụmatụ dị iche iche dị:
GitHub na-enye ma atụmatụ abụọ ma dị elu ma ndị ọkachamara na ndị na-abụghị ndị ọkachamara kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike ịhọrọ atụmatụ na-adabere na ihe ndị ị chọrọ ma nyefee ọrụ dị iche iche na-emeghe na-arụ ọrụ nke ọma. GitHub kwuru na ihe karịrị nde mmadụ 15 na-arụsi ọrụ ike n'ụwa nile na ihe karịrị nde ụlọ nde 55, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị elu.
Na GitHub, ị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche na-emepe emeghe dị ka akwụkwọ miri emi ma nweta nzaghachi sitere na ndị ọkachamara. Usoro ihe a na-eme ka ọ dịrị gị mfe nyochaa àgwà nke ọdịnaya gị.
3. Gosi ọrụ gị:
Ịchọrọ igosipụta ọrụ gị ma dọta ndị ahịa ọzọ? GitHub bụ ngwá ọrụ kachasị adaba na kachasị mma na nke a; na ya, ndị mmepe nwere ike igosi ọrụ ha ma tinyekwuo ndị na-enyocha ma ọ bụ ndị ahịa si n'akụkụ nile nke ụwa.
4. Mee ka akaụntụ gị dị mfe:
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta GitHub, ị ghaghị ịmepụta akaụntụ. Otú ọ dị, a pụrụ ibudata ụlọ ọrụ ọha na eze ma chọgharịa n'enweghị akaụntụ. Dị ka onye edere aha, ị ga-enwe ike ijikwa, tụlee ma mepụta nchekwa dị iche iche, nyefee onyinye gị na nyochaa koodu mgbanwe.
5. Ọrụ netwọk mmekọrịta:
GitHub na-enye nnukwu ọrụ netwọk mmekọrịta dị ka wikis, ndị na-eso ụzọ, mmasị, mbak, ihe, na ndepụta. Nkwekọrịta netwọk mmekọrịta ya na-enyere gị aka igosipụta ọrụ gị ma mee ka ị gbanwee na isiokwu ndị na-ewu ewu.
Markdown na-ahapụ anyị iji nchịkọta ederede dị mfe iji dezie ma ọ bụ dee akwụkwọ dị iche. N'adịghị ka ngwá ọrụ ndị ọzọ ndị ọzọ, ọ bụghị nanị na-akọwapụta ọdịnaya gị n'ụdị a haziri ahazi kamakwa na-echekwa ya na nchekwa data ya maka iji ọrụ ntanetị.
7. Sochie nsụgharị dị iche iche na nsụgharị dị iche iche:
Mgbe ndị dị iche iche jikọtara aka na ọrụ ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị adị mfe ịdebe ihe niile. Ma na GitHub, ị nwere ike soro mgbanwe ma debe ndekọ nke nyocha. Software a na-arụ ọrụ dị ka Google Drive na Microsoft Okwu; na GitHub, ị nwere ike ịnweta nsụgharị dị iche iche nke faịlụ ma ọ dịghị mkpa ịmalite ịmalite asụsụ mmemme dị elu.
8. Na-ejikọta na nhazi dị iche iche:
Otu n'ime ihe ndị kachasị iche na GitHub bụ na ya na Google Cloud na Amazon. Ọzọkwa, software a na-eme ka syntax pụta n'ihe karịrị 150 asụsụ mmemme ma mee ka ọrụ gị dị mfe Source .